Green Tea Sencha 100g (10 g X 10Pcs) (111) ဂျပန် လက်ဖက်ခြောက် – YURI Japanese Food Online Shop
Home › Green Tea Sencha 100g (10 g X 10Pcs) (111) ဂျပန် လက်ဖက်ခြောက်
Only 10032 left!
အပူအအေး ၂မျိုးလုပ်သောက်၍ရသော ဂျပန် လက်ဖက် ရည်ဖြစ်ပါသည်။ ပူပြင်းသောရာသီတွင်အအေးအဖြစ်သုံးဆောင်နိုင်ပါသည်၊ စိတ်ရွှင်လန်းစေပီးကိုယ်တွင်းအဆီများကိုပယ်ဖျက်ပေးပါသည်၊ ဓါတ်ဘူးထဲတွင် အထုပ်ကိုစိမ်ထားပြီးသုံးဆောင်ရန်ဖြစ်ပါသည်
ပုံမှန်သောက်သုံးပါက ဝမ်းမှန်ပြီး သိသိသာသာ ဝမ်းဗိုက်ချပ်ရပ်ကာ အဝလွန်ခြင်း အဆီတိုးခြင်းကိုကာကွယ်ပါသည်၊ ဆီး၊ ဝမ်းမှန်စေပြီးကိုယ်ခန္ဓ္ဓ္ဒ္ဒာပေါ့ပါးလန်းဆန်းစေပါသည်.
ဂျပန် Green Tea (Sencha TeaBags) <br> 100% သဘာဝအော်ဂဲနစ် ဂျပန် Green Tea (Sencha TeaBags) ဖြစ်ပါသည်။
Sencha ဆိုတာ ဂျပန် ရေပူနဲ့ သောက်ရတဲ့ ဂျပန်Green Tea ရဲ့ အခေါ်အဝေါ် တစ် မျိုး ဖြစ် ပါတယ် ။ Green Tea အမျိုးအစားများ ထဲမှာ 80% လူကြိုက်ပိုများပါတယ်.</p>
Green Tea ရဲ့ အဟာရတန်ဖိုးများကတော့ အများစုသိပြီးသား အချက်များပါ
၁.အဆီပိုများကို ဖယ် ထုတ်ပေးပြိးကိုယ်အလေးချိန် ကို ထိမ်းချုပ်ပေးပါတယ်.
၂.ဆီးချို ရောဂါကိုသက်သာစေပြီး မဖြစ်ရန် လည်းကာကွယ်ပေးပါ သည်။
၄.ကင်ဆာဆလ်များကို ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိစေပဲဖယ်ရှားပေးပါ သည်
၆. ဦးနှောက်ဆဲလ်များအသစ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကိုအားပေးပြီး စိတ်ပင်ပန်း နွမ်းနယ်မှု့ကို ပယ်ဖျော်ပေးပါသည်၊စိတ်ရွှင်လန်းစေ ပါသည်၊
၉.စိတ်တည်ငြိမ်မှု့ ရရှိစေပြီး စိတ်ကျရောဂါကိုအ ထူးကာကွယ်ပေးပါ သည်
10.အသားအရေ များတင်းရင်းစေပြိးအိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကိုကာကွယ် ပေးပါသည်.
အထုပ်တွင် အထုပ် ငယ်၁၀ ထုပ် ပါဝင်ပါသည်
ရေဘူး ၁လီတာ ဘူး ထဲတွင် အထုပ်ငယ်တစ်ထုပ်စိမ်ထားပြိး ပုံမှန်ရေအေးကဲ့သို့သောက်သုံး၍လဲရပါသည် အဆီကိုသိသာစွာကျစေသည်
Regular price K-8,500 K-8,500